The best of the best - winnie_teddy - Wattpad
#romance #kimminseok #parkchanyeol #hunhan #yaoi
Your Smile (Unicode)
7.4K 909 25
အဈကို့ အပွုံးတှကေ ကြှနျတျောကိုးကှယျတဲ့ ကြိနျစာတှေ ~ ~ ကြှနျတျောထှေးပှတေဲ့ အကွငျနာတှေ ~ ~ #sekai #kaihun #my isolated world
Kolasis Aionios (အနန္တအပြစ်ဒဏ်)
68.6K 7.8K 23
ငါဘုရင်မြတ်ရဲ့မောက်မာမှုကို ချိုးနှိမ်ချင်လို့ နတ်ဘုရားအပေါင်းက မောင်မင်းကို ဖန်တီးပေးသတဲ့ ... ဘာကြောင့်များ ငါဘုရင်မြတ်ရဲ့ မောက်မာမှု မကျိုးပဲ့ခင်မှာ မောင်မင်း ကွယ်ပျောက်သွားရသလဲ ... နတ်ဘုရားတွေကို မေးခွန်းထုတ်တော့ သူတို့က ပြန်ဖြေတယ် ... ငါဘုရင်မြတ်ကို အဆုံးမဲ့ အပြစ်ဒဏ် ကျခံစေလိုမှုကြောင့်တဲ့ ...။ Cover Art credited to...
59.3K 12.4K 20
All the events and characters in this story are ENTIRELY FICTIONAL !!!!!!
A RACONTEUR [Completed]
351K 44.8K 45
ပြျောရှငျမှုဟာ အတူရှိနရေုံနဲ့ ခရီးတှငျတယျ အဝါရောငျပနျးတှေ အိမျခနျးထဲထညျ့စိုကျခဲ့တယျ 🌻 ပျော်ရွှင်မှုဟာ အတူရှိနေရုံနဲ့ ခရီးတွင်တယ် အဝါရောင်ပန်းတွေ အိမ်ခန်းထဲထည့်စိုက်ခဲ့တယ်🍃 A loner foundaraconteur . . YiZhan Side pair - KrisHan
*Pricked * ( ZG + UNI )
7.2K 562 13
Something New, Something Blue, Not like usuals what u have ever seen Mino x OC Exclusively @ Kpop Fanfics Myanmar
39.6K 4.2K 12
pairing : xiuhan genre : romance, drama, yaoi, slight angst This story is not my own creation. The story line is inspired fromafiction I read once which I don't remember where so I'm not sure to whom I should give credit for the story line. But it is definitely not my own idea.
The Letters I'll Never Read ; You Are My Evangeline
17.1K 1.1K 6
တဈခြိနျတုနျးက ပိုငျဆိုငျခဲ့ဖူးတဲ့ လကျတဈစုံကို လှတျခပြေးခဲ့ပွီး .. ဘယျတော့မှ မဖတျဖွဈတော့မယျ့ ပေးစာတှကေို မမေ့ပဈနိုငျလညျး ငါမပေ့ဈခငျြခဲ့တဲ့ ၊ ငါ့ကို အမွဲတမျး ငေးကွညျ့နတေော့မယျ့ လူတဈယောကျဆီကနေ ရရှိနခေဲ့တယျ ။
42.6K 2.4K 4
တစ်ချိန်ချိန်မှာ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါ .. ငါ့ရွေးချယ်မှုက မှန်ကန်တယ်လို့ ငါတစ်ထစ်ချ ယုံကြည်ချင်ခဲ့တာ ။ (3Parts Story ~) cyclamen ပန်းတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ခွဲခွာခြင်း တဲ့ ။ _________________ တဈခြိနျခြိနျမှာ နောကျပွနျလှညျ့ကွညျ့တဲ့အခါ .. ငါ့ရှေးခယျြမှုက မှနျကနျတယျလို့ ငါတဈထဈခြ ယုံကွညျခငျြခဲ့တာ ။ (3Parts Story ~) cy...
389K 33K 19
A love story betweenahuman sacrifice ​andafox spirit! This is my own story~ Please enjoy ^ ^
670K 51.9K 46
This isacruse anymore but.....our love is unbreakable! The sequel of Love Legend! This story is my own story please enjoy~^ ^
28.5K 3.1K 5
The boy meetastranger ,astory teller ! And then the mystery begin ... This story is my own story . Please enjoy ^ ^
Ren's Untitled Story (Yizhan)
298K 29.9K 44
This story starts with end.
အခဈြဆုံး.......အခဈြဦး | အချစ်ဆုံး......အချစ်ဦး
104K 15.8K 28
အချစ်ဦး ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သိပ်လှတဲ့ဖြစ်တည်မှုပဲ။ အခဈြဦး ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ သိပျလှတဲ့ဖွဈတညျမှုပဲ။
" ပန်း​လေးတစ်​ပွင့်​ ဖြစ်​ခဲ့သည်​ " [ Zaw × Uni ]
421K 47.9K 70
[Unicode]ဆူးအပွညျ့နဲ့ နှငျးဆီ ဖွဈဖွဈ၊ စိမျးဖနျတဲ့ နှယျခကျ ဖွဈဖွဈ၊ ခဈြသူ့လကျနဲ့ ထိခတျမိလြှငျတော့.. အကွငျနာဆှတျသညျ့ ပနျးလေးတဈပှငျ့သာ..။ [Zawgyi]ဆူးအပြည့်နဲ့ နှင်းဆီ ဖြစ်ဖြစ်၊ စိမ်းဖန်တဲ့ နွယ်ခက် ဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူ့လက်နဲ့ ထိခတ်မိလျှင်တော့.. အကြင်နာဆွတ်သည့် ပန်းလေးတစ်ပွင့်သာ..။
15.8K 1.8K 4
တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဟာ.. ကလေး ဖန်ဆင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပဲ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း.....
The Constellation between us [SUHO x SEHUN]
54.5K 6.6K 29
Ever since the early days of life, Sehun had always dreamt of becomingasuccessful actor and he could give his all to reach his dreams even if his parents were strongly against it. However, without parental approval and financial support, failing every audition on top of that, Sehun was facing obstacles one after ano...
3.5K 421 10
တစ်ခုမေတ္တာရပ်ခံချင်တာကတော့ ဒီထဲက ဝတ္ထုတိုလေးတွေကို ဖတ်ပြီး တွေးကြည့်ပါ တွေးကြည့်ပြီးရင် ကိုယ်ခံစားရတဲ့ ကိုယ့်ဘက်က အမြင်လေးတွေကိုရေးချပေးခဲ့ပါ ။ ဝတ္ထုတိုတွေတဲ့ ၊ ရိုးရှင်းပါတယ် အရောင်မပါတဲ့ ဆန္ဒတစ်စုံ ခပ်ပါးပါးရယ်ပါ ။ (စာရေးတဲ့ ပုံစံ ကိုအသစ်တစ်မျိုး ပြောင်းပြီး စမ်းကြည့်ထားတာပါ )
C . A. F. M. [ Marriage's Sweetness ]♥
48.6K 4K 9
Oh Sehun ♥ Kim Minseok
Come And Find Me [ Season_2 ]
296K 27.5K 46
525K 46K 50
Come and Find me ! SEXIU
17.8K 1.1K 2
Kaihun ( Sekai ) One shot ! #yaoi ( OS ပေမဲ့ စာလုံးရေ သောင်းကျော်တာမို့ ဖတ်ချိန် * 30 minutes or 40 minutes * ရှိပါတယ်လို့ ㅎㅎ)
40.2K 4.3K 12
ကိုယ်က လေ...ပဲ ကလေး... ကိုယ့်ကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ဟိုးအဝေးကြီးကို လွင့်သွားမှာ...။
It Isn't Fairy Tale
100K 10.5K 26
နတ်​သမီးပုံပြင်​​တွေမှာပဲ လှပတဲ့အဆုံးသတ်​ဆိုတာ ရှိသတဲ့ ကျွန်​​တော်​တို့နှစ်​​ယောက်​ရဲ့ပုံပြင်​က​ရော???? #SeKai #KaiHun #my isolated world
310K 30.7K 18
ဒီတစ်ဘဝမှာ ဤတစ်ယောက်တည်းသာ... နန္ဒဦးမော် Romance,Spiritualism & Drama Mini Story of Dr.Nanda Oo Maw This isaromantic story between Soul & Wizard Girl So This'sanormal not BL Thankalot readers
Ephemeral || ChanBaek Drabbles
32.9K 4.1K 19
All the little things. ©® Helen_Fighter_Hnin Edits are mine unless stated otherwise. Some drabbles are inspired by random prompts from other social media apps.
2.1K 215 6
တစ်စုံတစ်​​ယောက်ဆီက မြစ်​ဖျားခံလာတဲ့ ​​​​ပျော်​ရွှင်​​မှုတွေ
အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်ရင် မင်းဖြစ်ဖြစ် ငါဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုံးက အမေ့ခံလေးတွေ ဖြစ်သွားမှာ . . .
𝘐 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘧𝘪𝘯𝘥 𝘢𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘭𝘪𝘬
3.4K 381 9
tiny spark to compare .
Hate is Preliminary of love
350K 28.6K 23
KS . Yaoi ...
558K 55.1K 31
"ကျနော့ အမြင်တော့ Lily ပန်းတစ်ပွင့်ထက်မပိုဘူး Hyung!!" "မဟုတ်ဘူး Jongin ရဲ့ Daffodil ပန်းတစ်ပွင့်မှာ အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိတယ် ရိုးသားပွင့်လင်းမှု အမှန်တရား သစ္စာရှိခြင်း အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်း Memory မျှော်လင့်ချက် ခွင့်လွှတ်ခြင်း ... ပီးတော့..." "အချစ်ရော?? ချစ်ခြင်းမေတ္တာရောပါလား သူ့ အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာ..." "ဟင့်အင်း...အဲတာ...